प्रबिधि Archives - Page 15 of 16 - Sabal Post
सन् २०१९: फेसबुकका लागि किन बन्दैछ खराब समयको सुरुवात ? जान्नुहोस् !
पुष २२ बुटवल । गत वर्ष सन् २०१८ मा हामीले सोसल मिडिया साइट फेसबुकमाथि विभिन्न खाले गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरु लागेको सुन्यौं, पढ्यौं । फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताका निजी डाटाहरु व्यापारिक प्रयोजनका लागि बेचिरहेको खुलासा भयो । यससम्बन्धमा जवाफ दिनका लागि फेसबुक
२२ पुष २०७५, आईतवार विस्तृतमा »
पहिलो पटक बर्मामा नेपाली फिल्म हेरेका बर्मेलीले भने– ‘पूर्खाको देश पुगे जस्तो लाग्यो’(भिडियो )
१६ पुस, काठमाडौं । तीन सय भन्दा धेरै नेपालीभाषी बर्मेलीले फिल्म हलमा पुगेर पहिलोपटक नेपाली भाषाको चलचित्र हेरेका छन् । यांगुनस्थित जेसिजीभी हलमा शुक्रबार राति नेपाली फिल्म ‘शत्रु गते’ प्रदर्शन गरिएको थियो ।चार सय सिट क्षमताको हलमा तीन सय २५
फेसबुक, ट्वीटर, गुगल डेमोक्रेटिकको पक्षमा उभिएको ट्रम्पको आरोप !
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साजाजिक सन्जालमा प्रभुत्व जनाएका फेसबुक, ट्वीटर र गुगलजस्ता कम्पनीहरू प्रतिपक्षी दल ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ को पक्षपोषणमा लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । ट्रम्पको सामाजिक सञ्जालविरुद्धको उक्त आरोप सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रसियाली एजेन्टहरूले सामाजिक सञ्जालको
४ पुष २०७५, बुधबार विस्तृतमा »
हुम्ला, २० मङ्सिर । हुम्लाको उत्तरी गाउँपालिकामा मोवाइल फोनको टावर बिगँ्रदा एक महीनादेखि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । सो टावर बिग्रँदा नाम्खा गाउँपालिका, वडाकर्मी, यालवाङ, याङ्गार, मुचु, गारीलगायतका गाउँका सेवाग्राही मर्कामा परेको नाम्खा माहामाया आधारभूत विद्यालयका शिक्षक दत्तबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
२० मंसिर २०७५, बिहीबार विस्तृतमा »
विश्वभर निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउँने तयारीमा चीनियाँ कम्पनी
एजेन्सी – एक चीनियाँ कम्पनीले विश्वभर निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउँने तयारी गरेको छ । विश्वभर निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउने तयारीमा चिनीयाँ एक इन्टरनेट कम्पनीले उपग्रह लिएर आएको छ । यसको उद्‌घाटन भने आउँदो बर्ष हुने बताइएको छ । उपग्रह चीनको
१५ मंसिर २०७५, शनिबार विस्तृतमा »
साइबर अपराधीहरूले यसरी गर्छन् ठगी, जान्नुहोस् ?
मंसिर १२, २०७५ काठमाडौं — साइबर अपराधीहरूले अनेकौं जालझेल गरेर मानिसहरूलाई ठगिरहेका हुन्छन् । तपाईं पनि त्यसको शिकार हुन सक्नुहुन्छ । पब्लिक वाईफाई पब्लिक वाईफाई नेटवर्कबाट जोकोहीले तपाईंको डेटामा पहुँच पाउँछ । त्यसैले कफी शपमा बसेर कहिलेपनि विद्युतीय बैंकिङ कारोबार नगर्नुहोला
अमेरिकाले पत्ता लगायो नयाँ ग्रह
नासा (एजेन्सी)/हालै मात्र खगोलशास्त्रीहरुले पृथ्वी भन्दा तीन गुणा ठुलो चट्टानयुक्त ‘सुपर अर्थ‘ ग्रह पत्ता लगाएका छन् । उक्त ग्रह पृथ्वीबाट ६ प्रकाश बर्ष दुरीमा रहेको बताइएको छ । अहिलेसम्म पत्ता लागेका ग्रहहरुमध्य यो नयाँ ग्रह तुलनात्मक रुपमा पृथ्वीबाट कम दुरीमा
विश्वविख्यात आरोहण टोलीले साईपाल हिमाल चढ्न सकेन
कात्तिक २९ बझाङ। बझाङमा रहेको सात हजार ३१ मिटर अग्लो साइपाल हिमाल आरोहण गर्न आएको विश्वविख्यात टोलीले समेत आरोहण गर्न नसकेर फर्किएको छ । झण्डै तीन साता देखि आरोहणको प्रयास गरिरहेको बिश्वबिख्यात अमेरिकी र क्यानेडियन र नेपाली आरोहण टोलीले साईपाल
Email : [email protected]mail.com , [email protected]